ဈေးနှုန်းချိုပြီး၊ ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Infrared Forehead Thermometer ရှာနေတာလား?? ~ The ICT.com.mm Blog
ဈေးနှုန်းချိုပြီး၊ ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Infrared Forehead Thermometer ရှာနေတာလား??
ဒါဆို ICT.com.mm မှာ Genial Infrared Forehead Thermometer Digital Temperature Gun With LCD Display ရှိတယ်နော်…
Genial Infrared Forehead Thermometer ဟာဆိုရင် Fahrenheit or Celsius နဲ့ပါ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အသုံးမပြုဘဲ ရပ်ထားချိန် 60 စက္ကန့်အကြာမှာ အလိုအလျောက် စက်ပိတ်ပေးတာကြောင့် ဘတ္ထရီသက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ Body temperature mode +/- 0.2 C သာကွဲလွဲမှုရှိတဲ့အတွက် အပူချိန်မှားယွင်းတိုင်းတာမိမှာကို စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူးနော်…
Genial Infrared Forehead Thermometer Digital Temperature Gun With LCD Display နဲ့ သာမိုမီတာကို ICT.com.mm မှ ဈေးနှုန်း K30,000 တည်းနဲ့ ဒီအောက်ကလင့်ခ်ထဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ…
Shop here: https://www.ict.com.mm/product/genial-infrared-forehead-thermometer-digital-temperature-gun-with-lcd-display/
Newer ICT.com.mm မှာ Amazfit ရဲ့ Bip S Smartwatch တွေဝယ်လို့ရနိုင်ပြီနော်
Older Lenovo ThinkPad L14 (i3-10th Gen) အနက်ရောင်ကို ICT.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်